Tag: fangatahana | Martech Zone
Demandbase + mampifandray: Fantaro ireo mpanapa-kevitra amin'ny kaonty kendrena
Alarobia, Aprily 27, 2016 Zoma, Aprily 29, 2016 Douglas Karr
Manohy manoratra momba ny tombotsoan'ny Marketing-based Marketing (ABM) izahay. Raha tsy azonao ny atao hoe ABM dia nohazavainay tamin'ny lahatsoratra teo aloha ny ABM ary koa ny dingana ilaina amin'ny fampiharana paikady ABM mahomby. Mbola misy ny fanamby amin'ny fampiharana ABM, na izany aza. Raha 97% ny mpivarotra B2B no nitatitra fa mandeha na mikasa programa ABM izy ireo ankehitriny ary 60% ny mpivarotra no mampiasa ABM hampiova ny kaonty kendrena ho fitarika na fotoana mety.
Inona ny atao hoe Marketing B2B miorina amin'ny kaonty?
Talata, Novambra 4, 2014 Talata, Aogositra 1, 2017 Douglas Karr
Inona no tsapan'ny ekipan'ny varotrao momba ny varotrao? Isaky ny manontany an'io fanontaniana io ny mpivarotra B2B dia iraisan'ny rehetra ny valiny. Ireo mpivarotra dia mahatsapa ho toy ny miondrika mankany aoriana mba hitondra fitarihana marobe, ary ny Sales dia tsy mahatsapa ny fitiavana. Mandeha toa izao ny fifanakalozana. Marketing: Nanolotra 1,238 Marketing Qualified Leads (MQL) tamin'ity telovolana ity izahay, 27% ambonin'ny tanjontsika! Varotra: Tsy mahazo ny fanampiana ilainay fotsiny izahay. Raha toa izany
Alakamisy 7, 2013 Alakamisy 7, 2013 Douglas Karr
Ny sary an-tsary namboarin'i Demandbase ho an'ity infographic ity, mampitaha ny marketing B2B nentim-paharazana amin'ny marketing kaonty dia mahafinaritra. Raha miasa ny marketing inbound mba hahatonga ny olona mety mankany amin'ny tranokalanao, dia mbola misy mombamomba anao misy ho an'ny mpanjifanao tsara indrindra tokony harahina. Ny fahafantarana ireo olona tonga amin'ny tranokalanao sy mahazo ny angon-drakitra firmagraphic (toetra mampiavaka ny orinasa) momba ny orinasa, taona, fidiram-bolany, isan'ny mpiasa, sns. Dia afaka manampy anao hanao laharam-pahamehana ny